I-china microfiber heat transfer transfer ephrintiwe ikhishi ithawula abakhiqizi nabaphakeli | IHefei Super Trade
Le micu ye-microfiber ephrintiwe ithawula, indwangu yokuwasha ephrintiwe kanye nethawula eliphrintiwe le-microfiber lisetshenziselwa ikhishi.
Ithawula le-dish eliphrintiwe le-Microfiber:
Kule microfiber ephrintiwe ithawula lesitsha, kukhona ama-2pcs ngesethi ngayinye noma ama-3pcs ngesethi ngayinye.
Kuma-2pcs ngesethi ngayinye, kukhona ithawula le-1pc eliphrintiwe lesitsha nethawula le-1pc lesitsha ngombala oqinile ngomklamo womugqa.
Kuma-3pcs kusethi ngayinye, kukhona ama-2pcs ithawula lesitsha eliphrintiwe elifanayo nethawula le-1pc lesitsha ngombala oqinile ngomklamo womugqa.
Le microfiber ephrintiwe ithawula lesitsha idlulisa ukushisa okuphrintiwe, ithawula eliqinile lesitsha lifakwa ngombala oqinile, futhi lo mbala oqinile ufana nomunye wemibala yokuphrinta yethawula lesitsha eliphrintiwe.
Imingcele yale microfiber ephrintiwe ithawula lesitsha yonke ivaliwe, umbala wentambo yokuthunga yethawula lesitsha eliphrintiwe umhlophe ngokuvamile, futhi umbala wentambo yokuthunga wethawula eliqinile lesitsha uhambelana nombala wethayela lesitsha ngokuvamile.
Ukwakheka kwale microfiber ithawula lesitsha eliphrintiwe lingu-100% i-polyester, ubukhulu bungu-41x48m, kanti isisindo silinganiselwa ku-280gsm.
Indwangu yokuwasha ephrintiwe:
Uhlangothi olungaphambili lwale microfiber ephrintiwe indwangu yokuwasha iyindwangu ye-microfiber enephrinta yokudlulisa ukushisa kanti uhlangothi lwangemuva luyindwangu ejwayelekile ye-microfiber ngombala omhlophe. Imingcele yale ndwangu yokuwasha ephrintiwe i-microfiber ivaliwe ngokweqile, futhi umbala wentambo yokuthunga uvame ukufanisa omunye wemibala yokuphrinta engxenyeni engaphambili yethawula, kwenza le ndwangu yokuwasha ephrintiwe ibukeke yinhle kakhulu.
Ukwakheka kwale ndwangu yokuwasha ephrintiwe eyi-microfiber yi-100% i-polyester, ubukhulu bayo bungu-30X30cm, kanti isisindo sayo singu-200gsm.
Le microfiber ephrintiwe indwangu yokuwasha iyisiqephu esisodwa, futhi singenza ama-2pcs ngesethi ngayinye noma ama-3pcs ngesethi ngayinye futhi.
Microfiber ukudluliswa ithawula ephrintiwe:
Uhlangothi olungaphambili lwaleli thawula lokudlulisa le-microfiber liyindwangu ye-microfiber enephrinta yokudlulisa ukushisa kanti uhlangothi lwangemuva luyindwangu ejwayelekile ye-microfiber ngombala omhlophe. Imingcele yale thawula ephrintiwe yokudluliswa kwe-microfiber ivaliwe ngokweqile, futhi umbala wentambo yokuthunga uvame ukuba mhlophe.
Ukwakheka kwaleli thawula eliphrintiwe lokudluliswa kwe-microfiber yi-100% i-polyester, ubukhulu bungu-38X60cm, kanti isisindo silinganiselwa ku-220gsm.
Le microfiber ithawula ephrintiwe ithawula ucezu olulodwa, futhi singenza 2pcs isethi ngayinye noma 3pcs isethi ngayinye futhi.
Kule micibisholo ephrintiwe yethawula lesitsha, indwangu yokuwasha ephrintiwe kanye nethawula eliphrintiwe le-microfiber, ukushesha kombala wazo kuhle kakhulu, futhi ukumuncwa kwamanzi kunamandla kakhulu. Futhi, singenza obunye ubungako, esinye isisindo, omunye umbala nokunye ukwakheka ngokuya ngesicelo samakhasimende.
Le microfiber ephrintiwe ithawula lesitsha, indwangu yokuwasha ephrintiwe ne-microfiber ithawula ephrintiwe isetshenziselwa ikhishi, singayisebenzisela ukugeza izitsha noma ukusula amanzi noma uthuli ematafuleni. Futhi, singazisebenzisa ukuhlanza iwindi noma izimoto noma ukwenza eminye imisebenzi yokuhlanza.
Langaphambilini indwangu yokudla kwendwangu ekhishwe nge-microfiber ekhishini
Olandelayo: Isethi yokulala yoboya beCoral kanye ne-Milk Flannel Duvet Cover
microfiber ephrintiwe dish ithawula
indwangu yokuwasha ephrintiwe ye-microfiber, ithawula eliphrintiwe le-microfiber
microfiber ekhishini ithawula nge enhle ukushisa tr ...
indwangu yetiye kakotini neqoqo likaKhisimusi
indwangu yokuwasha ye-microfiber enombala oqinile
microfiber chenille uhlaka ngamanzi eqinile absor ...
Umgijimi wetafula, Isethi yokulala yoboya bamaCoral, Indwangu yetafula le-PEVA, Ubisi Flannel Duvet Cover, ithawula lasekhishini, Isethi yokulala ye-Microfiber,